Midowga Yurub wuxuu bilaabay baaritaanka kahortaga aaminka Google ee laxiriira tabashooyinka tartanka - Jowhar somali news leader
By hanad	 On Jun 22, 2021
Baadhitaanka ayaa “qiimeyn doona in Google uu jabiyay sharciyada tartanka EU-da isagoo u xaglinaya adeegyadeeda tikniyoolajiyadeed ee xayeysiinta lagu soo bandhigayo internetka,” ayaa lagu yiri bayaan.
Cilmi-baaristu waxay hoos u dhigeysaa qayb muhiim ah oo ka mid ah moodeelka ganacsiga ee Google, halkaas oo in ka badan 80 boqolkiiba dakhliga weyn ee ka soo galay xayeysiinta sannadkii hore, ama $ 147 bilyan.
“Waxaan ka walaacsanahay in Google ay sii adkeysay u tartamida adeegyada xayeysiinta ee internetka in lagu tartamo” tiknoolajiyadda lagu soo bandhigo, ayay tiri madaxa tartanka EU Margrethe Vestager
Waxay ku lug leedahay Google inta badan aan la dareemin, laakiin tiknoolajiyada aadka u sarreeya ee u adeega sidii dhexdhexaadin ama dhexdhexaadin udhaxeysa xayeysiistayaasha iyo daabacayaasha khadka tooska ah.
Shirkadda ayaa sidoo kale udub dhexaad u ahayd kiis dhowaan ka dhacay Faransiiska – oo ay keeneen News Corp, wargayska maalinlaha ah ee Faransiiska ee Le Figaro iyo kan reer Belguim ee Groupe Rossel – kaas oo Google lagu ganaaxay million 220 milyan ($ 267 milyan).
Sida Faransiiska, Midowga Yurub waxay isku dayi doonaan inay go’aamiyaan in Google ay siisay daaweyn mudnaan leh teknolojiyadeeda keydinta xayeysiiska ee AdX iyo Doubleclick, laakiin sidoo kale waxay eegi doontaa dhinacyada kale ee ganacsigeeda.
Muhiimad ahaan, baaritaanka ayaa sidoo kale eegi doona qorshayaasha ay shaacisay Google ee ah in la mamnuuco in la dhigo “cookies”-ka seddexaad barta internet-ka ee Chrome, tallaabadaas oo ka careysiisay qaar ka mid ah daabacayaasha iyo xayeysiiyeyaasha.
Afhayeen u hadlay Google wuxuu yiri shirkadda “waxay sii wadi doontaa inay si wax ku ool ah ula shaqeyso Guddiga Yurub si ay uga jawaabto su’aalahooda oo ay u muujiso faa’iidooyinka wax soo saarkeenna u leeyihiin ganacsiyada Yurub iyo macaamiisha.”
Sidama votes in Ethiopia elections, other regions count tellen